မအူပင် လယ်သမား အရေးအခင်း တင်းမာနေဆဲ | ဧရာဝတီ
မအူပင် လယ်သမား အရေးအခင်း တင်းမာနေဆဲ
နန်းသီရိလွင်| February 27, 2013 | Hits:6,723
18 | | ဧရာဝတီတိုင်း မအူပင် မြို့နယ် အရှေ့ဘက်ရှိ မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စု တွင်ရှိနေသည့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်မြို့နယ် မလက်တို ကျေးရွာတွင် ယမန်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လယ်သမားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့၏ အဓိကရုဏ်းအပြီး ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းအချိန်အထိ အခြေအနေ ဆက်လက်တင်းမာနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“အခု လက်ရှိ ကျနော်တို့ လယ်သမားဦးရေ ၁၈၀ လောက်ရှိနေတယ်။ လုံထိန်းက ၂၀၀ လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ကန်ဘောင်ပေါ်မှာ ၁၄၄ ထုတ်ထားလို့ ကန်အောက်ဘက် လွတ်တဲ့ နေရာမှာ ဆင်းနေပါတယ်၊ လုံထိန်းတွေက တစ်ဘက်မှာရှိနေတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်အဖြစ်မျိုးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်မှာပါ” ဟု လယ်ယာမြေ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် တောင်းဆိုသူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် လယ်သမား ဦးမောင်မောင်စိုးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်က သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်ယာမြေများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပြန်လည် စိုက်ပျိုးခွင့်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာသို့ စာတင် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း အကြောင်းပြန်ကြားမှု မရှိသဖြင့် ဒေသခံ တောင်သူလယ်သမားများက နွေစပါးဝင်ရောက် စိုက်ပျိုးရန် ကြိုးပမ်းရာမှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နှစ်ဘက်အပြန်အလှန် အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ကြခြင်းကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၇ ဦး၊ လယ်သမား ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကာ မအူပင်မြို့နယ် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားရပြီး ဒဏ်ရာပြင်းထန်၍ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ထားရသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မအူပင်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းက အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့က လယ်သမားများ၏ ခံစားချက်၊ နစ်နာချက်များအတွက် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှ တဆင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရသို့ တင်သွင်းတောင်းဆိုရန် မအူပင် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တဆင့်ညှိနိုင်းခဲ့ရာ လယ်မြေ သိမ်းယူပြီး အော့ချဒ်ကုမ္ပဏီက ငါးကန်အဖြစ် အသုံးပြုနေသည့် နေရာကို ရေထပ်မသွင်းရန်၊ ငါးဖမ်းဆီးခြင်းမပြုရန်၊ ငါးကန်အတွင်းသို့ ကုမ္ပဏီနှင့် လယ်သမားများ ၂ ဘက်စလုံးမှ ငါးဖမ်းခြင်း၊ ကန်ဆယ်ခြင်း မပြုလုပ်ရန်တို့ကို လယ်သမားများမှ သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ရန်ကုန်မြို့မှ ရောက်ရှိနေသည့် လှိုင်သာယာ ဗေဒါ သင်တန်းကျောင်းမှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များက လယ်သမားများ လူစု မခွဲရန် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က စည်းကျော်၍ လူစုခွဲခဲ့ရာမှ အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တို့ ဒီကန်ဘောင်ပေါ်က ဆင်းသွားရင် လယ်တွေ ပြန်ရမှာ မဟုတ်ဖူး၊ ဒီလို လူစုစည်းနိုင်ဖို့ကလည်း နောက်ထပ် ထပ်မလွယ်တဲ့အတွက် လယ်တွေ ပြန်ရမယ်လို့ ကတိပြုချက်လိုမျိုး တခုခု ခိုင်ခိုင်မာမာရမှ ဆင်းမယ်လို့ သူတို့က ပြောတဲ့အတွက် ကျနော်တို့လည်း လူစု မခွဲခဲ့ပါဘူး။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ကျနော်တို့ကာရံထားတဲ့ စည်းကို ဖောက်ပြီး ၀င်လာတော့ ကျနော်တို့က လမ်းဖယ်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်တို့အုပ်စု အလယ်လောက်လည်းရောက်ရော အမျိုးသမီးတွေကို စရိုက်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့လည်း ပြန်ခုခံခဲ့ပါတယ်” ဟု ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းအတွေ့အကြုံကို ဒေသခံ လယ်သမား တစ်ဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး မအူပင်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအေးသောင်းကလည်း နောက်ဆုံး အခြေအနေကို ဧရာဝတီသို့ ယခုလို ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ကတော့ ဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက်ပဲ ဒီမှာ ဆက်နေရာယူထားပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ ကျနော်တို့ကို အကြမ်းမဖက်သ၍ ကျနော်တို့ကလည်း ဘာမှ လုပ်ဖို့ မရှိပါဘူး။ ၀ါးရုံတွေခုတ်မယ်၊ ရေကန်ကို ဖောက်ချမယ် မီးရှို့ဖျက်စီးမယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်တယ်ဆိုရင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် ကျနော်တို့က ဒီမှာ ဆက်နေရာယူထားပါမယ်၊ မနေ့က ညှိနှိုင်းပြီး ဖြစ်လို့ ဒီနေ့ ဆက်ညှိဖို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။”
ရန်ကုန်မြို့ Excel တာဝါတွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမား နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅၊ ၂၆ ရက်များတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှ တောင်သူ လယ်သမား ၁၅၀ ကျော် တက်ရောက် ကျင်းပနေချိန် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် သိမ်းဆည်းခံ လယ်ယာများ ပြန်လည်ရရှိရေး လှုပ်ရှားသူ မအူပင် တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ဖြိုခွင်းသူ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခ ၁၀ ဦးထက်မနည်း သေဆုံး
အဓိကရုဏ်း မဖြစ်စေရေး လှုပ်ရှားမှု စတင်
7 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website မြန်မာတိုင်းရင်းသူ February 28, 2013 - 3:19 am	လယ်သမားတွေကလဲ လယ်လုပ်ဘို့ လယ်မြေလိုတယ်။ သူတို့ လယ်မြေတွေကို မတရားသိမ်းယူထားတာ၊ နစ်နာကြေးလျော်ကြေးကိုလဲ ထိုက်တန်စွာ မပေးထားရင် သိမ်းသူဘက်က မတရား ဥပဒေမဲ့ ပြုကျင့်ခဲ့တာပဲ။
ရဲတွေကတော့ လခစား ၀န်ထမ်းမို့ စောင့်ဆို စောင့်ရမှာပဲ။ ကာဆိုကာ၊ ဖယ်ဆို ဖယ်၊ အမိန့်ကို နာခံလုပ်ရတာမို့ အပြစ်ရှိတယ် မပြောရက်ပါဘူး။ တကယ်က တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု လျော့နည်းမှုကြောင့် ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်နေ၊ ကြားနေရတာ။ အစကတည်းက သူတို့ လယ်တွေကို မတရား သိမ်းပိုက်မှု မရှိခဲ့ရင်၊ ဥပဒေနဲ့ အညီ ၀ယ်ယူခဲ့၊ ထိုက်တန်သော လျော်ကြေးပေးခဲ့ရင် (မဖြစ်စလောက် အဖြစ်သဘော လျော်ကြေးကို မဆိုလိုပါ)၊ အထက်က ဆိုသူတွေ မျှတစွာ ဥပဒေနဲ့ အညီ ပြုကျင့်ခဲ့ရင် သည်လို နှစ်ဦးနှစ်ဘက် နစ်နာမှုတွေ ကြားရမယ် မထင်ပါ။
ဒါ ၀မ်းနည်း စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းပါ။
Reply	မြန်မာတိုင်းရင်းသူ February 28, 2013 - 3:21 am	တခု ကျန်သွားတယ်။ အပေါ်က ဓါတ်ပုံထဲက ဗီဒီယို ရိုက်ယူနေတဲ့ ဆရာကြီးက နောက်မှ သည် ဗီဒီယိုနဲ့ တိုက်ပြီး ဆန္ဒပြ လယ်သမားတွေကို အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်ဖမ်းချင်လို့လား မသိ။ နောက်တခါ လယ်သမားတွေ သူ့ကို target ထား ၀ိုင်းရိုက်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။
Reply	banbanho February 28, 2013 - 9:52 am	အကြမ်းဖက်တဲ့နည်း နဲ့ ရဲတွေ ကို တိုက်ခိုက်တာ မကောင်းပါဘူး
ရဲမှာ လည်း ကာကွယ်ခုခံ ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
Reply	banbanho February 28, 2013 - 10:17 am	l want peace.j
Reply	banbanho February 28, 2013 - 11:09 am	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ ပြောတာ မှန်ပါတယ်
အခုလိုမျှမျှတတတွေးခေါ်ပေး တာ ကြိုဆိုပါတယ်
Reply	banbanho February 28, 2013 - 11:21 am	မြန်မာတိုင်းရင်းသူ ပြောတာမှန်ပါတယ်
အခုလို မျှမျှတတ တွေးခေါ်ပေးတာ ကြို ဆိုပါတယ်
Reply	သူရ February 28, 2013 - 3:10 pm	မအူပင်လယ်သမားပြသာနာကိုကြည်.ပြီးအကုန်လုံးသင်ခန်းစာရသင်.ပြီမဖြစ်သင်.ပဲဖြစ်ရတဲ.တာ လယ်သိမ်းထားတဲ. company တွေအနေနဲ.လဲပြသာနာကို လူကြီးလူကောင်းပီပီ ရင်ဆိုင်ဖို.ကောင်းပြီ ဘာမှမသိနားမလည်တဲ. လယ်သမားတွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်နေတဲ. လူတွေလဲ အသိတရားရသင်.ပြီ
အဖြေရှာဖို့ လိုနေတဲ့ လယ်သမားနှင့် စိုက်ဘဏ်ချေးငွေ ပြဿနာ
အကြွေးဝင်္ကပါထဲက လယ်သမား နင်းပြားများ
စဉ့်ကူးတွင် တပ်သိမ်း လယ်ဧက ၃၀၀၀ ကျော်အတွက် ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ဆက်လက် ပြုလုပ်
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် မြေယာလျော်ကြေးကိစ္စ မရေရာသဖြင့် ဒေသခံများ မကျေနပ်
ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင် လယ်သမား ၁၉ ဦး တရားစွဲခံရ